UMosimane uveza okumenze wanqaba ‘impesheni’ yeBafana - Impempe
UMosimane uveza okumenze wanqaba ‘impesheni’ yeBafana
Ukufanise nokuthi ubezobe esethatha impesheni uPitso Mosimane ukubuyela kwiBafana Bafana la iSAFA beyimnxenxa, imgabisela nenkontileka yeminyaka eyisithupha. Lo mqeqeshi we-Al Ahly uthi yena akazwani nendawo la engezukuba nanselelo khona, yingakho enqabile ukusuka eGobhithe la angase azoshwe noma nini.
Abaphathi be-Al Ahly bayaziwa ngokungabekezeli kwabo uma iqembu lehlulekile ukuwina iCAF Champions League neligi yasekhaya. Kumanje uMosimane uhlezi ngesinqe esisodwa kwazise ezakhe zisendaweni yesibili kwilogi ekhaya.
KwiChampions League kumele adlule kwezakhe zakudala, iMamelodi Sundowns ukuze angene emidlalweni eyandulela owamanqamu. Bazodlala owomlenze wesibili behamba phambili ngo 2-0 abawushaye eGibhithe ngomGqibelo eLucas Moripe Stadium.
“Ngingumuntu othanda izinselelo, ngithanda ukuya ezindaweni ezibandayo, hhayo la kufudumele khona,” kusho uMosimane. “Ngabe ngahlala kwiSundowns ngoba benginenkontileka yeminyaka emine khona. Kodwa ngashiya ngaya la nginikwe khona iminyaka emibili.
“Ngaqoka ukuya eqenjini la ngiphoqeleke khona ukuwina iChampions League. Ngikhethe ukuya eqenjini la kumele ngiwine iligi, ngiwine ne-Egypt Cup. Eqenjini la sidlala khona eNdebeni yoMhlaba (yamaqembu) sibuye nendondo.
“Kuke kwavela ithuba lokuphinda ngibe ngumqeqeshi weqembu lesizwe isikhathi eside – bengizothola inkontileka yeminyaka eyisithupha, bengiyogugela khona. Kodwa ngihlale la kubanda khona. Yilapho ukhozi luhlala khona,” kusho yena ezifanisa nale nyoni ethathwa njengenkosi yezilwane ezindizayo.
“Uyalwazi lunjani ukhozi. Siya ezindaweni ezibandayo. Futhi kuhle ke lokho ngemuva kokuwina izindebe eziningi eNingizimu Afrika. Angifuni ukugidagida ndawonye.
“Izindawo ezibandayo, la kunezimo ezinzima khona… ngicabanga ukuthi senike nafunda ngokuthi kwenzakalani uma nje sike sadlala ngokulingana. Lokho kungenxa yokuthi sinabalandeli abangu-70-million. Kuhlukile kakhulu ngokokucabanga, isimo nezinkanyezi ezisebhejini yeqembu yizo ezikuchaza kangcono ukuthi uyini ukuze uqashwe la.
“Ngidinga ukudlala neBayern (Munich), Palmeiras nomdlalo womkhaya baseCairo, ngibhekane neMamelodi Sundowns. Ngibhekane nabo bonke abaqeqeshi abasezingeni base-Europe. Kwiligi yaseGibhithe, bonke abaqeqeshi abakhulu yabathola. Bengingazihlalela ekhaya ngiphinde ngiwine iDStv Premiership,” kusho uMosimane.
Previous Previous post: Izobuya isikhokha isizumbulu kompetha iMangosuthu Marathon
Next Next post: Umqansa oqwalekayo lo obhekene neSundowns kwi-Ahly